Ramamimampionona Gérard : “aleo hotanterahana ny fifidianana” | NewsMada
Ramamimampionona Gérard : “aleo hotanterahana ny fifidianana”
“Raha ny hevitra teny, mizara roa ny momba ny fifidianana. Misy ny hoe halefa avy hatrany ny fifidianana. Ao ny manan-kevitra hoe aleo aloha manao fanorenana ifotony, izay vao manao fifidianana mba hisian’ny filaminana. Ao anatin’ny fanadihadiana izany isika amin’izao fotoana izao, ary miteny ny rehetra hoe: inona no tena mety mba tsy fifidianana hiteraka korontana?”
Io ny fanehoan-kevitra ny filoha lefitry ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy (CFM), faritanin’Antananarivo, Ramamimampionona Gérard, momba ny fandravonana ny hevitr’ireo mpandray anjara tamin’ny fampihaonana nokarakarain’ny CFM, teny amin’ny CCI, Ivato, ny 1 jona lasa teo.
Tsara ny manao fifidianana. Ilaina koa ny mandinika rahefa vita ny fifidianana ka ao anatin’ny fahamarinana, tokony hitarika filaminana amin’ny asa atao sy ny tohin’ny fiainam-pirenena. Tsy sanatria vita ny fifidianana maimaika, ka afaka roa, telo, efa-taona… hiverina toy izao indray ny firenena. “Manahirana izany”, hoy izy.
Tena amin’ny fomba ahoana ary rahoviana àry no hahazoanao manao fifidianana? Mba tsy fifidianana hikoropohana, hiteraka zava-doza ao aoriana ao… Fa fifidianana milamina, handraisan’ny rehetra anjara ary eken’ny rehetra.
Tsy misy hevitra very…
Tena ilaina amin’izao fotoana izao ny valim-panontaniana avy amin’ireo mpandray anjara tamin’ny fihaonana teny amin’ny CCI, Ivato. Ao anatin’ny fandravonana sy ny fandaminana izany ny CFM amin’izao: ahoana no fanatanterahana izany, hanomezana azy amin’izay sehatra tokony hahazo azy? Misy homena ny Primatiora, ohatra, na any amin’ny Ceni. Izay no atao amin’izao fotoana izao, fa tsy very ny hevitra rehetra teny.
Ny manahirana, misy hevitr’olona vitsivitsy tadiaviny hoe izay ny hevitra navoaka avy amin’ny CFM. Tsy mbola namoaka fandravonan-kevitra ny CFM, fa ao anatin’izany amin’izao fotoana izao. “Araka ny fiaraha-miasan’ny rehetra ny fanatanterahana ny fifidianana, fa mahamenatra raha mandeha irery eo ny CFM”, hoy izy. Samy manana ny andraikiny tandrify azy ny tsirairay.